Memoirs nke anụ ọhịa: foto doro anya nke ịzụ ahịa mmadụ | Akwụkwọ ugbu a
Ncheta nke obi ọjọọ
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Ndị edemede, Novela
Okwu Bebi Fernández kwuru
Ncheta nke obi ọjọọ bụ akwụkwọ akụkọ onye edemede Valencian Bebi Fernández —Ms. M na -arankụ mmanya. Ebipụtara na Nọvemba 2018, ọ bụ mpụta mbụ onye edemede n'ụdị a, yana ederede na -emepe usoro ọmụmụ ya Anụ ọhịa. Egwuregwu a na -ekpuchi isiokwu ndị nwere mmetụta dịka ịzụ ahịa ụmụ nwanyị na ime ihe ike mmekọahụ. Fernández na -eji asụsụ a na -emeghị emezi na nke na -emeghe iji kpughee ịdị ike nke ala mmụọ a na otú n'ime ya na -anapụ nnwere onwe ha ma na -amanye ha ime omume obi ọjọọ na nke obi ọjọọ.
Uche Bebi bụ nwanyị na -eji netwọkụ mmekọrịta ya -Twitter na Instagram- iji nyere aka na nke a. Maka ya, ọ dị mkpa na ọ ga -akụziri onwe ya nha anya nwoke na nwanyị. N'ihi ya, na -arụ ụka, sị: “Anyị na -agbanwe ọha mmadụ n'ezie site na ịntanetị. Netwọk mmekọrịta bụ injin mmụta obi ọjọọ maka ọgbọ na -esote nke m ”.
1 Memoirs nke nchịkọta mkparị
1.1 Akwa ndakpọ olileanya
1.2 Ụwa siri ike
1.3 Eziokwu ọhụrụ
1.4 Ịgba akwụna na imegbu ụmụ nwanyị
2 Nyocha nke Memoirs nke Savage
2.1 Isi data nke akwụkwọ akụkọ
2.2.3 Ihe odide ndị ọzọ
2.3 Ihe omumu
3 Banyere onye edemede, Bebi Fernández
Na nchikota nke Ncheta nke obi ọjọọ
Akwa ndakpọ olileanya
N'oge ọkọchị nke 96 -mgbe afọ iri na ise gachara-, Jacobo na Ana na -eche ọkpara ha. Ọ gụsiri ya agụụ ike na ihe e kere eke bụ nwoke, ka ọ bụrụ ọdịnihu ọ ga -eweghara azụmahịa ezinụlọ (ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ), ọrụ adịghị mma maka ụmụ nwanyị. Otú ọ dị, Mgbe amuchara nwa, nwoke ahụ chere na atụmatụ ya niile dara: tụgharịrị bụrụ nwata nwanyị.
Ụwa siri ike
Nwa ahụ bụ baptizim Kasandra —K—. Ya tolitere n'etiti gburugburu ebe obibi macho ebe ụmụ nwanyị na -elekọta ụlọ naanị. Nwa agbọghọ mara mma - nke nwere agwa siri ike na nkwenye doro anya - nwere nzụlite igwe ojii nke nna ya kpatara mwute karịa obi ụtọ.
Mgbe K gbara afọ 19, e gburu Jacobo. Ihe omume nke nwere ike ịpụta ịpụ na ụwa ọjọọ ahụ maka nwa agbọghọ ahụ, kpalitere ọnọdụ ọjọọ.
Ihe ncheta nke onye obi ọjọọ: ...
Otu onye kacha mma nke o ji azụ ahịa mebiri onye isi ahụ, ihe niile bụ n'ihi nnukwu ụgwọ o ji. N'agbanyeghi na echere na '' nkwa '' ahụ mechara mgbe Jacobo nwụsịrị, Emil, onye isi otu ndị omekome ahụ, rịọrọ ka K na nne ya kwụọ ego ahụ.
Ha abụọ, n'enweghi ego, debere iwu onye ahụ mejọrọ iji chekwaa ndụ ha. N'ihi, K aghaghị ịrụ ọrụ dị ka onye na -anabata ndị ọbịa n'otu n'ime ụlọ akwụna ya, ruo mgbe edoziri akaụntụ ya.
Ịgba akwụna na imegbu ụmụ nwanyị
N'ime ọgba a, K hụrụ otu eziokwu dị egwu: a na -emeso ọtụtụ ụmụ nwanyị ihe dị ka ndị ohu ... a na -eti ha ihe ma na -emegbu ha kwa ụbọchị. Ha bụ ndị mba ọzọ nke e ji echiche nke "ọdịnihu ka mma dị ka ihe nlereanya" duhie. A tọọrọ ha, wepụ ha na kọntaktị ndị ha hụrụ n'anya na manyere n'ịgba akwụna iji kwụọ "ụgwọ" nke njem ahụ nke nyere ha ohere iru "ala ahụ e kwere na nkwa."
Kwa ụbọchị, Emil na ndị na -akwado ya - "ndị akpụrụ mmiri" - na -emechu ụmụ nwanyị niile ihu. Otú ọ dị, ọ dịghị onye n'ime ha dara mbà. K ekweghị ka e merie ya site na mafiaya mere o kpebiri idebanye aha na klaasị nke ịgbachitere onwe ya. Ọ dị ka nke a bịara na mgbatị ahụ Ram, ọkachamara mara mma krav magá ọkachamara, onye nyere ya ndụmọdụ na nka nka.
N'etiti K na Ram enwere njikọ ozugbo, otu o sila dị, ọ jụrụ ịdaba n'ịhụnanya. Nwatakịrị nwanyị ahụ zụlitere ụdị mmekpa ahụ dị otú a n'ebe ụmụ nwoke nọ nke na ọ na -esiri ya ike ịtụkwasị otu obi. N'akụkụ nke ya, Ram enweghịkwa ndụ dị mfe, ma mara ka esi amata mmetọ, yabụ kpachara anya mgbe ị na -agakwuru ya. Nexus kwuru na -eme ka onyonyo a gbasaa Site na ya usoro ihe omume siri ike na nke a na -atụghị anya ya na -apụta nke na -ebute nsonaazụ.
Nyocha nke Ncheta nke obi ọjọọ
Isi data nke akwụkwọ akụkọ
Ncheta nke obi ọjọọ nwere ngụkọta nke 448 peeji, kewara n'ime 14 isi na -enwe ọdịnaya. Ọ bụ kọrọ na onye nke atọ; Fernández na -eji a asụsụ doro anya ma sie ike. Nkata ahụ na -apụta na a ụda mmiri nke na -abawanye ruo mgbe a kagburu ya.
Ọ bụ nwa agbọghọ mara mma, nke na -acha ọcha na anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -ama mma ya. O tolitere na gburugburu obi ọjọọ, nke iwu na -akwadoghị na ndị obi ọjọọ gbara ya gburugburu bụ ndị mere nnukwu ihe mmerụ ahụ kemgbe ọ bụ nwata. Otú ọ dị, ọ nwere nnukwu ike; Mmụọ mmụọ ya nyere ya ohere iji obi ike chee ndụ metụrụ ya aka mgbe nna ya nwụsịrị. Ọ gaghị ezu ike ruo mgbe a ga -emere onwe ya na ndị ọzọ ndị Icemen ikpe ikpe.
Ọ bụ onye na -eto eto agwakọta egwuregwu mgbatị ahụ. Ọ nọ na -eme krav magá ruo ọtụtụ afọ. N'agbanyeghị ịbụ onye nkuzi, debere usoro kachasị dị ize ndụ ma na -egbu egbu. Mgbe ọ zutere K, ịma mma ya kụrụ ya aka, mana n'otu oge ahụ na-echegbu onwe ya maka ọdịmma ya mgbe ọ hụsịrị ọtụtụ ọnya na akpụkpọ ahụ ya. N'amaghị ama, naanị eziokwu ya na ya dabara dabara tinye ndụ ya n'ihe egwu.
Onye edemede jisiri ike kọwaa nke ọma odide, na onye ọ bụla n'ime ha nwere oke nha, enweghị "ihe nzacha". Fernández kwusiri okwu ike na akụkọ ụmụ nwanyị akwụna. N'ime ha bụ: Katia, Bruna, Marcela, Maisha, Polina na Aleksandra; ụmụ agbọghọ niile na -eto eto si mba ọzọ, ndị na -agwa ndụ ha n'oge nkata ahụ niile.
Bebi Fernández weliri olu ya wee setịpụ ụkpụrụ dị ịrịba ama gbasara ịzụ ahịa mmadụ na oke nrigbu mmekọahụ ha na -ata. N'agbanyeghị na ọ bụ akụkọ ifo, ọ na -egosi eziokwu siri ike na ọtụtụ ụmụ nwanyị bi na Spain. Maka onye edemede, ọha mmadụ na -atụgharị ọnọdụ a azụ; N'akụkụ a, ọ na -ekwusi ike: "Achọrọ m inye olu maka nsogbu a akọwapụtara n'ihi na ịgbachi ya gburugburu dị m ka ihe arụrụ arụ."
N'ime ọrụ ya dị ka onye omekome, onye dere ya ahụla ihe ọjọọ dị n'ịgba ohu. Ọ bụ ịjụ arụrụala a mere o ji jide ihe niile dị n'akwụkwọ edemede ya abụọ. Banyere ahụmịhe ya na ụdị ndị omekome a, o kwuru, sị: “Amaara m otu ha si arụ ọrụ, ọ nweghị iwu ma ọ bụ ihe mgbochi ga -akwụsị ha. Ọ ga -eme ka ndị na -azụ ahịa gwụ ya. "
Ọ na -eche na agụmakwụkwọ dị mkpa iji kwụsị maja na mpụ ndị a. Banyere nke a, o kwupụtara: "Mmụta na ụkpụrụ, ọgụgụ isi mmetụta na ọmịiko, bụ ọ bụghị ogidi bụ isi, ma ntọala nke ihe ngwọta ya dị na ya nsogbu ogologo oge nke ime ihe ike megide ụmụ nwanyị ”.
Banyere onye edemede, Bebi Fernández
Bebi Fernández, onye pseudonym Srta mara. Bebi, amụrụ na Valencia na 1992. Ọ mụrụ ọpụrụiche na ime ihe ike nke nwoke na nwanyị, mpụ a haziri ahazi, na itinye aka na mpụ na mmeri. Ọ bụ onye na -akwado ụmụ nwanyị, nwere nnukwu ewu ewu na netwọkụ mmekọrịta. Na ihe karịrị otu nde na ọkara ụmụazụ, bụ otu n'ime ndị kacha amata mmetụta ụmụ nwanyị na Spain.
Dị ka onye edemede, ọ malitere na akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ ndị na -ede uri: Ịhụnanya na ịkpọasị (2016) na Enweghi ike. (2017), ha abụọ bụ akwụkwọ ọgụgụ o mere n'oge ọ bụ nwata. Emere nnukwu mpụta mbụ ya dị ka onye na -ede akụkọ na 2018 na akụkọ nwanyị Ncheta nke obi ọjọọ. Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, mgbe ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ akụkọ mbụ a gasịrị, m na -aga n'ihu n'otu isiokwu ahụ wee gosipụta: queen (2021).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Ncheta nke obi ọjọọ